Nagu saabsan - Shenzhen Felix warshadaha Co., Ltd.
Aad baad ugu mahadsantahay imaatinkaaga !!
Shirkadeena waxaa la aasaasay 2005, waa xirfadle soosaarid R&D ah iyo iibinta notebook, Xusuus qoryo dhejis ah, Faylka faylka, Gacmo nadiifiye, maqaar PU, Waxyaabaha PPE iwm. Shirkadda Warshadaha.
Waxaan joognaa magaalada Shenzhen oo leh marin gaadiid oo ku habboon. Maanta ilaa maanta, Waxaan haysannaa koox in kabadan 300 oo qof iyo qarniyaal khibrad ganacsi oo shisheeye ah, Alaabooyinkeenna waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Koonfurta Ameerika, Australia, Afrika iyo Aasiya.
Tayada koowaad! Adeeg marka hore!
Haddii aad rabto inaad hesho macluumaad badeecad oo dheeraad ah ama wax su'aalo ah, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto. Waxaan had iyo jeer diyaar u nahay inaan kuu adeegno, oo sinaba kuu siin doonno !!
Iyada oo laga jawaabayo cudurka faafa ee adduunka, shirkadeena ayaa ka jawaabeysa baaqa dowladda, waxay si firfircoon ugu diyaarineysaa alaabada ka hortagga faafa.
Dabcan, waxaan leenahay dhammaan shahaadooyinka dhameystirka iyo shahaadooyinka dhoofinta. Ku soo dhowow inaad nagala soo xiriirto si aan ugala tashanno
Qof walbana ha fiicnaado！